Maxaan ugu heli waayey emailada la doonayo ama walxaha kale feylka PST go'an? - DataNumen
Mararka qaarkood emayllada aad rabto iyo walxaha kale waa la soo ceshan karaa laakiin magacyadooda waa la beddelay ama waxaa loo wareejiyaa faylal gaar ah sida "Recovered_Groupxxx", musuqmaasuqa faylka awgood. Marka si loo xaqiijiyo haddii emayllada ama walxaha kale la soo kabsaday, waad isticmaali kartaa maadooyinka emaylka ama astaamaha kale ee shayga, si aad u raadiso.
Xagga galka, haddii aad wali xasuusato qaar ka mid ah emayllada galkaas ku jira, markaa waxaad ka raadin kartaa emaylladooda maaddooyinkooda, ka dibna ku saleysan natiijada baaritaanka, raadso galka aad dooneyso.
hel emayl, pst
La daabacay May 14, 2021
Waxaan ka helayaa qalad "Out of Memory" markaan dayactirayo PST /OST faylka Maxaa la sameeyaaWaxaa jira waxyaabo aan loo baahnayn oo ku jira faylka PST ee go'an. Sidee loo baabi'iyaa?